UNeeskens ushiye angalazi kubadlali bakhe
Johannesburg - UJohan Neeskens ujikele abadlali bakhe ngemuva komdlalo wangoLwesithathu ebusuku weligi abawudlala ngokulingana naMaZulu, ngengoba eseshintsha ukukhuluma, ekhala ngokungazinikeli nangendlela abadlali abalahla ngayo amathuba, kubika iKickOff.com.
Ukudlala ngokulingana ngo 1-1 neqembu elingenzi kahle njengabo kukhombise ukuthi iSundowns namanje ayikabi nakho ukuzethemba njengoba behlulekile ukudlala koweligi ngendlela abenza ngayo koweTelkom Knockout.
Okokuqala kule sizini, umqeqeshi weMamelodi Sundowns, useshintshe ukukhuluma, wajikela abadlali bakhe wathi kumele banyuse amasokisi uma befuna ukuphuma otakwini abakulona.
Ezinyangeni ezedlule, njengoba iSundowns ingadlali nje kahle futhi isemsileni weligi, lo mqeqeshi waseHolland ubelokhu ethi nakanjani bazowaphendula amatafula ngokubona indlela abenza kahle ngayo ejimini.
"Angilindele ukuthi badlale ngendlela encomekayo, kodwa ngifuna ukubona ukuzimisela. Bangakwenza lokho uma bezimisela," kusho uNeeskens.